Iyo FAS yakatsanangura maitiro ekudzora mitengo yezvigadzirwa zvakakosha munharaunda
Bazi rezvekurima rakakoka varimi kuti vatengese zvigadzirwa mumunda
Russia yaunza yunifomu zvinodiwa kumatirakita nemotokari dzinozvifambira
Varimi vanobvumidzwa kuvaka dzimba panzvimbo yekurima
kuru Musoro nhau State
kubva munaChikunguru 1, varimi veRussia vanogona inishuwarenzi zvirimwa kana zvarasika semhedzisiro
"Kubva munaChikunguru 1, inishuwarenzi yekurima muRussia yakagadziridzwa zvakanyanya - inogona kuve chimwe chezvinhu zvikuru zvekuchengetedza dunhu rega rega ...
Gurukota rezvehupfumi rakaronga kuongorora mamiriro emitengo yemakarotsi
Musangano wepakati pemapazi pamamiriro ezvinhu nemitengo yezvinhu zvakakosha munharaunda yakaitirwa ku Ministry of Economic Development yeRussia nekutora chikamu kwevamiriri ve Ministry of Industry and Trade yeRussia, Ministry of Agriculture ...
Hurumende yeRussia inotarisira kudzikisa mitengo yemichero nemiriwo nekudzorera njanji yekutakura njanji neUzbekistan. Kune izvi, Russia ...
Russia ichasimbisa kutonga pamusoro pekunze kwemishonga yekuuraya zvipuka uye agrochemicals
Kubva munaJune 29, 2021, zvichave zvichikwanisika kutakura mishonga yekuuraya zvipuka uye agrochemicals kuRussia chete kuburikidza nedzimwe nzvimbo dzekuongorora dzemuganhu. Izvo ...
Anopfuura mabhiriyoni mazana maviri emabhuru. ichaendeswa kukuvandudzwa kwenzvimbo dzekumaruwa muRussian Federation muna 220
Muna 2021, zviremera zveRussia zvichagovera anopfuura mabhiriyoni mazana maviri nemakumi maviri ema ruble ekuvandudza zvivakwa mumaruwa. mukati mehurongwa hwehurongwa hwakasiyana-siyana hwehurumende ...
Iyo nguva yekugara kwenguva pfupi kwevatorwa muRussia yakawedzerwa kusvika munaGunyana 30
Mutungamiri weRussia Vladimir Putin akawedzera kusvika munaGunyana 30 kurambidzwa kwekudzingwa kwevatorwa uye vanhu vasina nyika muRussia. Chirevo chakakodzera ...
Chuvashia ichadzorera makumi matatu kubva muzana emutengo wekutenga michina yekumhanyisa kugadzira mukaka, nyama, mbatatisi nemiriwo Sarudzo iyi yakaitwa nhasi ...
Kusvika pakupera kwa Chivabvu, iyo Ministry of Energy, iyo Ministry yezvekurima uye iyo Ministry yeindasitiri nekutengeserana ichagadzira zvirevo zvekutara mitengo yezvinhu zvakasvibirira zvinoshandiswa mupolymer kurongedza. Her ...
Gurukota rezvemitemo, Konstantin Chuichenko, anotenda kuti zano rekutsiva vekunze vashandi vevapoteri nevasungwa vekumba rakarurama. Mukuru uyu akataura izvi mu ...
Muna 2022, iro Ministry rezvekurima reRussian Federation rakagadzirira kudzikisa zvakarongwa rubatsiro rweye agro-maindasitiri tata kumatunhu anoratidza yakaderera mhedzisiro mukuunza mari ku ...
Peji 1 pa9 1 2 ... 9 Tevere